Fryer-ka aan saliid lahayn (mifreidorasinaceite.com) waxaa iska leh shabakadda shabakadda Blog, shirkad leedahay AB Shabakadaha Internetka 2008 SL, CIF: B85537785, oo cinwaankiisu yahay C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Waxaad kala xiriiri kartaa:
ayuu yiri cinwaanka boostada
emaylka xiriirka (at) baloog (dhibic) com
telefoonka (+34) 902 909 238
Ilaalinta xogta shaqsiyeed
Masuul ka ah daaweynta
Faahfaahinta xiriirka qofka masuulka ah: Miguel Ángel Gaton oo leh emayl xiriir ah miguel (at) actualityblog (dot) com
Xuquuqdaada ilaalinta xogta
Sida loo adeegsado xuquuqdaada: Waxaad u diri kartaa warqad qoraal ah xafiiska diiwaangashan ee shabakadaha internetka ee AB Internet 2008 XNUMX SL ama cinwaanka emaylka ee ku xusan cinwaanka ogeysiiskan sharci, oo ay ku jiraan labada xaaladood nuqul ka mid ah aqoonsigaaga ama dukumiinti kale oo aqoonsi oo la mid ah, si aad u codsato jimicsiga xuquuqda soo socota:
Xaq u lahaanshaha helitaanka macluumaadka shakhsiga: waxaad weydiin kartaa AB Internet Networks 2008 SL haddii shirkadan ay daweynayso xogtaada.
Xaqa aad u leedahay inaad saxdo (haddii ay khaldan yihiin).
Xaq ayaad u leedahay inaad codsato xaddidaadda daaweyntaada, haddii ay sidaa tahay waxaa hayn doona oo keliya AB Internet Networks 2008 SL si jimicsi ama difaac loogu sameeyo sheegashooyinka.
Xuquuqda diidmada daaweynta: Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay joojineysaa ka baaraandegidda xogta sida aad tilmaamtay, haddii aysan jirin sababo macquul ah oo qasab ah ama jimicsiga ama difaaca sheegashooyinka suurtagalka ah waa in la sii wadaa in laga shaqeeyo.
Xuquuq u lahaanshaha xogta: haddii ay dhacdo inaad rabto in xogtaada ay ka shaqeyso shirkad kale, AB Internet Networks 2008 SL waxay fududeyneysaa in macluumaadkaaga loo gudbiyo maareeyaha cusub.
Xuquuqda tirtirka xogta: iyo marka laga reebo sharci daruuriga ah waa la tirtiri doonaa kadib xaqiijintaada.
Moodooyinka, foomamka iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada: Bogga rasmiga ah ee Wakaaladda Isbaanishka ee Ilaalinta Xogta
Suurtagalnimada ka noqoshada ogolaanshaha: Haddii ay dhacdo inaad oggolaasho u oggolaatay ujeedo gaar ah, waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto wakhti kasta, adigoon saameyn ku yeelan sharcinnimada daaweynta ee ku saleysan oggolaanshaha ka hor bixitaankeeda.
Sida loogu dacwoodo Hay'adda Xakamaynta: Haddii aad u aragto inay dhibaato ka jirto habka AB Internet Networks 2008 SL ay u maamusho xogtaada, waxaad u gudbin kartaa cabashadaada Maamulaha Amniga ee Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 XNUMX (kor ku xusan) ama hay'adda ilaalinta xogta taas oo u dhiganta, ahaanshaha Hay'adda Isbaanishka ee Ilaalinta Macluumaadka, midka lagu tilmaamay kiiska Spain.
Xaqa in lagaa iloobo iyo helitaanka xogtaada shaqsiyeed
Waqtiyada oo dhan, waxaad xaq u yeelan doontaa inaad dib u eegto, soo kabato, magac la’aan iyo / ama masaxdo, gebi ahaan ama qayb ahaan, xogta ku kaydsan Websaydhka. Kaliya waa inaad email u dirtaa contacto@actualidadblog.com oo aad codsataa.
Xogta la kala saaray Xogta la kala saaray ayaa la hayn doonaa iyada oo aan la tirtirin.
Macluumaadka macaamiisha quudinta e-mayl: Laga soo bilaabo xilligan isticmaalaha iska diiwaangeliya illaa ay ka baxaan.
Xogta macaamiisha ee warsidaha: Laga soo bilaabo xilligan isticmaalaha iska diiwaangeliya illaa ay ka baxaan.
Xogta isticmaale ee ay soo gelisay shabakadaha AB Internet Networks 2008 SL bogagga iyo astaamaha shabakadaha bulshada: Laga soo bilaabo marka isticmaalehu bixiyo ogolaanshahooda ilaa ay ka noqdaan.
Sirta iyo amniga xogta
AB Internet Networks 2008 SL waxaa ka go'an adeegsiga xogta, si ixtiraamaan sirtooda iyo inay u adeegsadaan si waafaqsan ujeedadooda, iyo sidoo kale inay u hogaansamaan waajibaadkooda ah inay ilaashadaan isla markaana ay la qabsadaan dhammaan tallaabooyinka si looga fogaado isbeddel, lumis, daaweyn ama marin aan loo idmanayn, iyadoo la raacayo qodobbada Xeerka Boqortooyada ee 1720 / 2007 ee Diseembar 21, oo ansaxineysa Xeerarka horumarinta Sharciga Dhaqanka 15/1999 ee Diisambar 13, ee ku saabsan Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed.
Waxaad damaanad qaadaysaa in xogta shakhsiga ah ee lagu bixiyay foomamku ay run tahay, lagana doonayo inay la soo xiriirto wixii isbeddel ah ee iyaga ku yimaada. Sidoo kale, waxaad dammaanad ka qaadaysaa in dhammaan macluumaadka la bixiyay ay u dhigmaan xaaladdaada dhabta ah, inay tahay mid casriyeysan oo sax ah.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad cusbooneysiisaa xogtaada marwalba, adoo mas'uul ka ah khaladka ama been abuurka xogta la bixiyay iyo waxyeelada ay keeni karto tan Shabakadaha Internetka AB ee 2008 SL mulkiilaha degelkan, ama dhinacyada saddexaad sababo la xiriira isticmaalka ayaa sheegay.
AB Internet Networks 2008 SL waxay qaadataa talaabooyin macquul ah oo macquul ah oo lagu ogaanayo jiritaanka fayrasyada, weerar xoog leh iyo cirbadeynta koodhka.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad la socotaa in tallaabooyinka amniga ee nidaamyada kombiyuutarka ee internetka aan gebi ahaanba la isku halleyn karin sidaas darteedna, AB Internet Networks 2008 SL ma ballan qaadi karo maqnaanshaha fayrasyada ama walxaha kale ee sababi kara isbeddelada nidaamka kombiyuutarka. (softiweerka iyo qalabka) ee Isticmaalaha ama dukumiintiyada elektaroonigga ah iyo faylalka ku jira.
Iyadoo ay taasi jirto, in la isku dayo dammaanad qaadaya amniga iyo asturnaanta macluumaadkaaga shaqsiyeed, websaydhku wuxuu leeyahay nidaam ilaalin nabadgelyo oo firfircoon oo ka warbixiya waxqabad kasta oo adeegsade iyo jebinta suurtagalka ah ee amniga xogta isticmaalaha.
Haddii ay dhacdo in la ogaado xadgudub kasta, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay ballan qaadaysaa inay ogeysii isticmaalayaasha ugu badnaan 72 saacadood.
Macluumaad noocee ah ayaan ka soo aruurineynaa isticmaaleyaasha iyo waxa aan u isticmaalno
Dhammaan badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo websaydhka waxay tixraacayaan foomamka xiriirka, foomamka faallooyinka iyo foomamka si loo sameeyo diiwaangelin isticmaale, ka mid noqoshada joornaal iyo / ama amarrada iibsiga.
Websaydhkani wuxuu had iyo jeer u baahan yahay oggolaanshaha hore ee dadka isticmaala si ay uga baaraandegaan xogtooda shaqsiyadeed ujeedooyinka la tilmaamay.
Waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaagii hore wakhti kasta.
Diiwaanka waxqabadyada ka shaqeynta xogta
Webka iyo martigelinta: Websaydhku wuxuu leeyahay SSL TLS v.1.2 encryption kaas oo u oggolaanaya dirista xogta shakhsiga ah ee aaminka ah iyada oo loo marayo foomamka xiriirka caadiga ah, oo lagu martigeliyey server-yada AB Internet Networks 2008 SL ay qandaraas ka qaadatay Shabakadaha Occentus.
Xogta laga soo ururiyey shabakadda: Xogta shakhsiga ah ee la ururiyey waxay ku xirnaan doontaa farsameyn otomaatig ah waxaana lagu dari doonaa faylasha u dhigma ee ay leeyihiin AB Internet Networks 2008 SL.
Waxaan heli doonnaa IP-gaaga, kaas oo loo adeegsan doono in lagu xaqiijiyo asalka fariinta si aan kuu siino macluumaad, kahortaga faallooyinka SPAM iyo si loo ogaado khaladaadka suurtagalka ah (tusaale ahaan: dhinacyada iska soo horjeeda ee isku kiiska ah ku qor bogga internetka isla IP), sidaas sida xogta la xiriirta ISP-gaaga.
Sidoo kale, waxaad nagu siin kartaa xogtaada adoo adeegsanaya emayl iyo qaabab kale oo isgaarsiineed oo lagu muujiyo qaybta xiriirka.
Foomka Jawaab-celinta: Shabakadda waxaa jira suurtagalnimada in isticmaaleyaashu ay uga tagaan faallooyinka daabacaadaha bogga. Waxaa jira cookie keydiya xogta uu bixiyay adeegsadaha si aysan ugu qasbin inay dib ugu soo galaan booqasha kasta oo cusub sidoo kale cinwaanka emaylka, magaca, websaydhka iyo cinwaanka IP-ga ayaa laga soo ururiyaa gudaha. Xogta waxaa lagu keydiyaa server-yada shabakadaha Occentus Networks.
Diiwaangelinta Isticmaalaha: Lama ogola ilaa iyo inta si cad loo codsado.
Foomka wax iibsiga: Si loo helo badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo bakhaarradeenna internetka, isticmaaluhu wuxuu leeyahay foom iibsi oo ku xiran shuruudaha qandaraaska ee lagu qeexay siyaasadeena halka lagala xiriiri doono iyo macluumaadka lacag bixinta. Xogta waxaa lagu keydiyaa server-yada shabakadaha Occentus Networks.
Waxaan ka aruurineynaa macluumaadka adiga kugu saabsan inta lagu guda jiro howsha lacag-bixinta dukaankayaga. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara, oo keliya maahan, magacaaga, cinwaankaaga, emaylkaaga, taleefankaaga, faahfaahinta lacag-bixinta iyo kuwa kale ee lagama maarmaanka u ah in la fuliyo amarradaada.
Maareynta xogtaan waxay noo ogolaaneysaa:
Waxaan kuu soo diri doonaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan koontadaada / amarkaaga / adeeggaaga.
Kajawaab codsiyadaada, cabashooyinka iyo codsiyada magdhawga.
Samee lacag bixinta oo iska ilaali macaamillada khiyaanada ah.
Isku hagaaji oo maamul koontadaada, ku siiso adeeg farsamo iyo adeeg macaamiil, iyo xaqiiji aqoonsigaaga.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale aruurin karnaa macluumaadka soo socda:
Goobta iyo xogta taraafikada (oo ay ku jiraan cinwaanka IP-ga iyo biraawsarka) haddii aad amar bixiso, ama haddii aan u baahannahay inaan qiyaasno canshuuraha iyo kharashyada dhoofinta ee ku saleysan goobtaada.
Bogagga alaabada la booqday iyo waxyaabaha la daawaday inta kalfadhigu socdo.
Faallooyinkaaga iyo dib u eegista alaabta haddii aad doorato inaad ka tagto.
Cinwaanka dirista haddii aad weydiisato kharashka dhoofinta ka hor intaadan iibsan inta fadhigu socdo.
Kukiyada aasaasiga ah si ay ula socdaan waxa ku jira gaadhigaaga inta fadhigu socdo.
Email iyo lambarka sirta ah ee koontadaada si loogu oggolaado inaad gasho koontadaada, haddii aad mid leedahay.
Haddii aad sameysato koonto waxaan keydineynaa magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarka taleefankaaga, si aad ugu isticmaasho amarradaada mustaqbalka.
Foomamka ku-qoridda joornaalka: Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay adeegsataa adeegga dirista warsidaha Sendgrid, Feedburner ama Mailchimp, kaasoo kaydiya xogta emaylkaaga, magacaaga iyo aqbalaadda rukumashada. Waad ka saamixi kartaa joornaalka wakhti kasta adoo adeegsanaya xiriirin gaar ah oo ku taal salka alaab kasta oo aad hesho
Email: Adeeg bixiyaha emaylkeena waa Sendgrid.
Fariin deg deg ah: AB Internet Networks 2008 SL kuma bixiso adeeg fariin deg deg ah, sida WhatsApp, Facebook Messenger ama Line.
Bixiyeyaasha adeegga lacag-bixinta: Adoo adeegsanaya shabakada, waxaad ka heli kartaa, xiriiriyeyaasha, degellada websaydhka-saddexaad, sida PayPal o karbaash, si loo bixiyo lacag bixinta adeegyada ay bixiso AB Internet Networks 2008 SL. Marna shaqaaluhu AB Internet Networks 2008 SL SL ma heli karaan faahfaahinta bangiga (tusaale ahaan, nambarka kaarka deynta) ee aad siiso dhinacyada saddexaad.
Ka kooban waxyaabaha ku jira shabakadaha kale
Maqaallada ku jira websaydhka waxaa ku jiri kara waxyaabo ku jira gundhig (tusaale fiidiyowyo, sawirro, maqaallo, iwm.). Waxyaabaha ku duugan bogagga kale waxay u dhaqmaan si la mid ah sidii qof soo booqday soo booqday degelka kale.
Websaydhadaani waxay soo aruurin karaan macluumaadka adiga kugu saabsan, isticmaal buskudyada, ku dhexjiraan raadinta qeybta saddexaad, iyo inay kormeeraan isdhexgalkaaga waxyaabaha ku jira, oo ay ku jiraan la socoshada isdhexgalkaaga waxyaabaha ku jira haddii aad koonto leedahay ama aad ku xiran tahay boggaas.
Adeegyada kale: Adeegyada qaarkood ee lagu bixiyo websaydhadu waxay ka koobnaan karaan shuruudo gaar ah oo leh qodobbo gaar ah oo ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. Waa lagama maarmaan in la akhriyo lana aqbalo ka hor inta aan la codsan adeegga su'aasha ku jirta.
Ujeedo iyo sharciyeyn: Ujeedada laga shaqeynayo xogtaan waxay kaliya noqon doontaa in lagu siiyo macluumaadka ama adeegyada aad codsato.
Jiritaanka shabakadaha: AB Internet Networks 2008 SL waxay leedahay xog-warranno ku saabsan qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu waaweyn internetka.
Ujeedo iyo sharciyeyn: Daaweynta ay AB Internet Networks 2008 SL ku fulin doonto xogta ku dhex jirta mid kasta oo ka mid ah shabakadaha aan soo sheegnay waxay noqon doontaa, ugu badnaan, kan ay shabakada bulshadu u oggoshahay astaamaha shirkadaha. Sidaa darteed, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay awood u yeelan doontaa inay ku wargeliso, marka sharcigu mamnuucayo, kuwa raacsan si kasta oo ay shabakadda bulshadu ugu oggolaato waxqabadkeeda, soo bandhigiddeeda, dalabkeeda, iyo sidoo kale bixinta adeeg macmiil shaqsiyeed
Soo saarida xogta: Si kastaba xaalku ha ahaadee Shabakadaha Internetka ee AB AB 2008 XNUMX SL waxay ka soo saari doontaa xogta shabakadaha bulshada, ilaa ogolaanshaha isticmaalaha si gaar ah oo cad loogu helo in sidaas la sameeyo.
Xuquuqda: Marka ay tahay dabeecadda isku xidhka shabakadaha bulshada, jimicsiga wax ku oolka ah ee xuquuqda dhowrista xogta ee raacaha waxay ku xirnaan doontaa wax ka beddelka astaamaha shakhsiga ah ee tan, Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL ayaa kaa caawin doona oo kugula talin doona illaa dhammaadka fursadaha ay leedahay.
Processor-ka ka baxsan EU
Emayl. AB Internet Networks 2008 Adeegga emaylka ee loo yaqaan 'SL' waxaa lagu bixiyaa iyadoo la adeegsanayo adeegyada Sendgrid.
Baraha bulshada. AB Internet Networks 2008 SL waxay isticmaashaa shabakadaha bulshada Mareykanka ee YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard oo loo gudbiyo xog caalami ah, oo ah dabeecad gorfeyn iyo farsamo la xiriirta websaydhka ay ku jiraan server-keeda. in AB Internet Networks 2008 SL ay daaweyso xogta iyaga, iyaga, adeegsadayaasha, macaamiisha ama badmaaxyaashu ugu gudbiyaan shirkadda AB Internet Networks 2008 SL ama ay la wadaagaan.
Bixiyeyaasha lacag bixinta. Si aad wax uga bixin karto PayPal o karbaash, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay u diri doontaa xogta adag ee lagama maarmaanka u ah kuwaas lacag-bixiyayaashan lacag-bixinta si loo soo saaro dalab bixinta u dhiganta.
Macluumaadkaaga waa la ilaalinayaa iyadoo la raacayo siyaasadeena gaarka ah iyo nidaamka 'cookies'. Markaad dhaqaajiso rukunka ama aad bixiso macluumaadkaaga lacag bixinta, waad fahantay oo aad aqbashay qaanuunkayaga gaarka ah iyo nidaamka 'cookies'.
Waxaad had iyo jeer xaq u lahaan doontaa helitaanka, sixitaanka, tirtirka, xaddidaadda, qaadista iyo hilmaaminta xogtaada.
Laga soo bilaabo marka aad iska diiwaangelisid isticmaale ahaan degelkan, Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 SL waxay marin u leeyihiin: Magaca isticmaalaha iyo emaylka, cinwaanka IP, cinwaanka boostada, ID / CIF iyo macluumaadka lacag bixinta.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 SL waxay xaq u leeyihiin inay wax ka beddelaan, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, laakiin ku wargalinta, soo bandhigidda iyo qaabeynta websaydhka sida ogeysiiskan sharciga ah.
Ballanqaadyada iyo waajibaadka naga saaran adeegsadayaashayada
Helitaanka iyo / ama adeegsiga websaydhkan waxay u egtahay qof kasta oo sameeya xaaladda isticmaalaha, aqbalaadda, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn Boos, ogeysiiskan sharciga ah ee la xiriira adeegyada qaarkood iyo waxyaabaha ku jira bogga.
Markaad isticmaaleyso degelkan, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuusan sameynin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda AB Internet Networks 2008 SL ama dhinac saddexaad ama waxyeellayn kara, gabin kara ama culeys ka saari kara bogga ama ka hor tagi kara Si kasta ha noqotee, wax caadi ah isticmaalka shabakadda.
Nidaamkeena asturnaanta wuxuu qeexayaa sida aan u ururino, u kaydinno ama u isticmaalno macluumaadka aan ku ururinno adeegyada kala duwan ama bogagga laga heli karo boggan. Waxaa muhiim ah inaad fahanto macluumaadka aan aruurino iyo sida aan u isticmaalno tan iyo markii marin u helka degelkan ayaa ka dhigan aqbalida siyaasadeena asturnaanta.
Helitaanka waxay ku lug yeelan kartaa isticmaalka cookies. The cookies Iyagu waa qaddar yar oo macluumaad ah oo ku kaydsan biraawsarka uu adeegsado isticmaale kasta si markaa adeeguhu u xasuusto macluumaad gaar ah oo uu hadhow adeegsan karo. Macluumaadkani wuxuu kuu oggolaanayaa in laguu aqoonsado inaad tahay isticmaale khaas ah wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad kaydiso waxyaabaha aad doorbidayso, iyo sidoo kale macluumaadka farsamada sida booqashooyinka ama bogagga gaarka ah ee aad booqato.
Isticmaalayaashaas aan rabin inay helaan cookies ama aad rabto in laguu wargaliyo ka hor inta aysan ku kaydsan kombuyuutarkaaga, waad u habeyn kartaa biraawsarkaaga ujeedkan.
Badi daalacashada maanta waxay oggolaadaan maaraynta cookies 3 siyaabood oo kala duwan:
ka cookies weligood lama aqbalo.
Browser-ka ayaa weydiinaya adeegsadaha haddii ay tahay inuu mid waliba aqbalo cookie.
ka cookies had iyo jeer waa la aqbalaa.
Browser-ka waxaa sidoo kale ku jiri kara awooda si wanaagsan loogu cadeeyo waxa cookieswaa in la aqbalaa iyo mida kale. Gaar ahaan, isticmaaluhu wuxuu aqbali karaa mid ka mid ah xulashooyinka soo socda:
diidaan cookies ee xayndaabyada qaarkood;
diidaan cookies ka socda dhinacyada saddexaad;
in la aqbalo cookies sida aan joogto ahayn (waa laga saaraa marka biraawsarku xirmo);
u oggolow server inuu abuuro cookies ee cinwaan ka duwan.
Google, adeeg bixiye ahaan, waxay u isticmaashaa cookies si ay ugu adeegto xayeysiiska shabakadda.
Waad joojin kartaa isticmaalka 'cookie' DART ee nidaamka xayeysiiska Google adoo marinaya Xarunta asturnaanta Google.
Intaa waxaa sii dheer, daalacashada ayaa sidoo kale u oggolaan kara isticmaaleyaasha inay eegaan oo tirtiraan cookies shaqsi ahaan.
Waxaad haysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cookies gudaha: Wikipedia
Goobtani sidoo kale way martigalin kartaa shabakadaha shabakada (sidoo kale loo yaqaan cayayaanka webka). The shabakadaha shabakada badiyaa waa sawirro yar yar oo pixel ah oo pixel ah, la arki karo ama aan la arki karin oo la gelinayo koodhka isha ee bogagga shabakadda. The shabakadaha shabakada u adeeg oo loo isticmaalo qaab la mid ah cookies. Intaa waxaa dheer, the shabakadaha shabakada Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro taraafikada isticmaaleyaasha booqda bogga internetka iyo inay awoodaan inay helaan qaab ay ku isticmaalaan bog.
Waxaad haysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shabakadaha shabakada gudaha: Wikipedia
Xaaladaha qaarkood, waxaan la wadaagnaa macluumaadka ku saabsan booqdayaasha boggan si qarsoodi ah ama wadar ah dhinacyada saddexaad sida xayeysiistayaasha, kafaala qaadayaasha ama hantidhawrka ujeeddada kaliya ee ah in la horumariyo adeegyadayada. Dhamaan shaqooyinkaan wax lagu qabanayo waxaa lagu nidaamin doonaa iyadoo la raacayo qawaaniinta sharciga ah iyo dhamaan xuquuqdaada ku saabsan ilaalinta xogta waa la ixtiraami doonaa iyadoo la raacayo xeerarka hadda jira.
Boggan wuxuu ku cabbiraa taraafikada xalal kala duwan oo aad isticmaali karto cookies o shabakadaha shabakada si loo falanqeeyo waxa ka dhacaya bogaggeenna. Waxaan hadda u isticmaalnaa xalalka soo socda si aan u cabirno taraafikada boggan. Waxaad arki kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan siyaasada asturnaanta mid kasta oo ka mid ah xalalka loo adeegsaday ujeedkan:
Google (Falanqaynta): Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google Analytics
Automattic / Quantcast (Xogta JetPack): Nidaamka gaarka ah ee 'Automaatik' y Quantcast.
Disqus (nidaamka faallooyinka): Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Disqus
Boggan waxaa kale oo laga yaabaa inay martigeliyaan xayeysiin u gaar ah, xiriiriyeyaal, ama shabakadaha xayeysiinta. Xayeysiintan waxaa soo bandhigaya server-yada xayeysiinta ee waliba adeegsada cookies si loo tuso waxyaabaha la xiriira xayeysiinta isticmaaleyaasha. Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan xayeysiinta ah wuxuu leeyahay siyaasad u gaar ah, oo lagala tashan karo bogaggooda internetka.
ka cookies Iyagu waa feylal lagu abuuray biraawsarka isticmaalaha si loogu qoro waxqabadkooda Websaydhka loona oggolaado dheecaan badan iyo hagitaan shakhsi ahaaneed.
cookie magaca Ujeeddo Macluumaad dheeraad ah
Google Analytics __Dawaaji
__utmz Waxay ururisaa macluumaad qarsoodi ah oo ku saabsan marinka isticmaalayaasha iyada oo loo marayo websaydhka si loo ogaado asalka booqashooyinka iyo xogta kale ee tirakoobka ee la midka ah. Waqtigan xaadirka ah ma isticmaalno cookies-ka. - Xarunta Asturnaanta Google
-Google Analytics plugin-ka-bixida
Google Adsense, Lababa Guji, DART __gaduud Waxay ururisaa macluumaadka ku saabsan marin habaabinta si ay ugu adeegto xayeysiinta - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google Adsense
Automattic, Quantcast iyo Disqus __qta
xikmad Waxay uruurisaa macluumaad qarsoodi ah oo ku saabsan marinka isticmaalayaasha iyada oo loo marayo websaydhka si loo ogaado asalka booqashooyinka iyo macluumaadka kale ee tirakoobka ee la midka ah. - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Quantcast
Caqiido __atuvc Kukiyada '__atuvc' waxaa adeegsada nidaamka wadaagista bulshada ee Addthis si loo hubiyo in dadka isticmaala ay u arkaan miiska wadaagga bulshada ee isku dhafan badhanka bulshada ee bogga si sax ah loo cusbooneysiiyey. - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Addthis
Si loo isticmaalo Websaydhkan muhiim ma aha in la rakibo cookies. Isticmaaluhu ma aqbali karo iyaga ama ma habeyn karo barowsarkooda si uu u xannibo iyo, meeshii ay ku habboon tahay, ka baabi'iyo
Waxa kale oo jira buskud u dhigma shabakadaha bulshada ee ay adeegsadaan degelkan siyaasaddooda cookie u gaarka ah.
Cookie-ka Twitter, sida lagu siiyay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo isticmaalka buskudka.
Kaydka Facebook, sida lagu siiyay Siyaasadda cookies
Google + cookie iyo Khariidadaha Google Maps, sida lagu bixiyay boggeeda ku saabsan waxa nooca buskud ee la isticmaalay
Kukiyada Pinterest, sida lagu siiyay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo isticmaalka buskudka
Cookie Gravatar, sida lagu bixiyay siyaasadda gaarka ah ee shirkadda Automattic.
Waqtigan xaadirka ah boggan wuxuu martigeliyaa xayeysiinta:
Adsense Google: Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google Adsense - Shuruudaha iyo xaaladaha -Siyaasadaha barnaamijka
Xakamaynta: Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Adconion
Google DFP: Siyaasadda asturnaanta Google DFP.
Iibsashada: Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Buysellads - Shuruudaha iyo xaaladaha
Taboola: Siyaasadda asturnaanta Taboola.
Mas'uuliyadda sharciga ah ee ka kooban
Boggu wuxuu ka kooban yahay qoraallo loo diyaariyey kaliya ujeeddooyin macluumaad ama macluumaad ah oo aan ka tarjumeyn karin xaaladda hadda jirta ee sharciga ama fiqiga oo tixraacaya xaaladaha guud sidaa darteed waxyaabaha ay ka kooban tahay weligood ma adeegsan karo isticmaale kiisaska gaarka ah.
Fikradaha laga dhiibtay dhexdooda ayaan daruuri ka turjumaynin aragtiyada Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL.
Nuxurka maqaallada lagu daabacay bogga lama tixgelin karo, si kasta oo ay tahay, beddel talo sharci.
Isticmaaluhu waa inuusan ku dhaqmin salka macluumaadka ku jira goobta isagoon marka hore adeegsan talobixin xirfadeed oo u dhiganta.
Xuquuqda hantida aqooneed iyo warshadeed
Iyada oo la adeegsanayo Xaaladahaas Guud, looma qoondeyn karo xuquuqda lahaanshaha aqooneed ama warshad bogga ama mid ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay, taranka, beddelka, qeybinta, wada xiriirka bulshada, u soo bandhigida dadweynaha, soo saarista, dib u isticmaalida, iyadoo si cad looga mamnuucay Isticmaalaha.Ugudbinta ama adeegsiga nooc kasta, qaab kasta ama habraac, midkastoo kamid ah, marka laga reebo kiisaska ay sharci ahaan u oggol yihiin ama u fasaxayo haystaha xuquuqda u dhiganta.
Isticmaaluhu wuu ogyahay oo wuu oggol yahay in websaydhka oo dhan, oo ay ku jiraan astaamo aan dhammaystirnayn qoraalka, sawirrada, naqshadaha, softiweerka, waxyaabaha ku jira (oo ay ku jiraan qaabdhismeedka, xulashada, habeynta iyo soo bandhigidda isku mid ah), maqalka maqalka iyo sawirada, waxaa ilaaliya calaamadaha ganacsiga, xuquuqda daabacaadda iyo xuquuqaha kale ee sharciga ah ee diiwaangashan, iyadoo la raacayo heshiisyada caalamiga ah ee Spain ay qayb ka tahay iyo xuquuqda kale ee hantida iyo sharciyada Spain.
Haddii ay dhacdo in isticmaale ama dhinac saddexaad u arko in lagu xadgudbay xuquuqdooda aqooneed ee sharciyeed sababo la xiriira soo bandhigidda waxyaabaha qaarkood ee goobta ku yaal, waa inay ku wargeliyaan AB Internet Networks 2008 SL xaaladahaas oo kale, iyagoo tilmaamaya:
Xogta shaqsiyeed ee qofka xiiseynaya lahaanshaha xuquuqda la sheegay inuu jabiyay, ama wuxuu muujiyaa wakiilnimada uu ku kaco haddii dacwada ay soo bandhigto dhinac saddexaad oo aan aheyn kooxda xiiseyneysa.
Muuji waxyaabaha ay ilaalinayaan xuquuqda hantida aqooneed iyo meesha ay ku yaalliin goobta, aqoonsiga xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee la tilmaamay iyo cadeyn cad oo ay daneyneyso mas'uulka ka tahay run ahaanshaha macluumaadka lagu bixiyay ogeysiiska.
Shuruucda iyo xallinta khilaafaadka
Xaaladaha hadda jira ee isticmaalka goobta waxaa lagu xukumaa mid kasta oo ka mid ah xagjirnimadiisa sharciga Isbaanishka. Luqadda qoraalka iyo tarjumida ogeysiiskan sharci waa Isbaanish. Ogeysiiskan sharci ahaan shaqsi ahaan looma xareyn doono isticmaale kasta laakiin wuxuu ahaan doonaa mid laga heli karo internetka internetka.
Isticmaalayaashu waxay u gudbin karaan Nidaamka Xalinta Khilaafaadka Macaamiisha ee AB Internet Networks 2008 SL ay qayb ka noqon doonto xalinta wixii khilaafaad ah ama sheegasho ah ee laga soo qaatay qoraalkan ama waxqabad kasta oo ka socda AB Internet Networks 2008 SL, marka laga reebo xalinta khilaafaadkaas sababa horumarka hawl u baahan xubinnimo, taas oo ay dhacdo inuu adeegsaduhu u aado waaxda u dhiganta ee ururka qareennada ku habboon.
Isticmaalayaasha leh xaaladda macaamiisha ama adeegsadayaasha sida lagu qeexay qawaaniinta Isbaanishka kuna nool Midowga Yurub, haddii ay dhibaato ku qabaan iibsiga khadka tooska ah ee loo sameeyay AB Internet Networks 2008 SL, si ay isugu dayaan inay la gaaraan heshiis maxkamadda ka baxsan tagi karaa Madasha Xalinta Khilaafaadka ee khadka tooska ah, oo ay abuureen Midowga Yurub ayna soo saareen Komishanka Yurub ee hoos imanaya Xeer (EU) 524/2013.
Maadaama uusan isticmaaluhu ahayn macaamil ama isticmaale, iyo marka uusan jirin sharci ku qasbaya haddii kale, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u gudbiyaan Maxkamadaha iyo Maxkamadaha caasimadda Madrid, maadaama ay tani tahay meeshii lagu soo gabagabeynayay heshiiska, oo si cad looga tanaasulayo wixii awood kale oo u dhiganta iyaga.
Waxa aan ka fileyno isticmaaleyaasha
Helitaanka iyo / ama adeegsiga tan qof kasta oo sameeya xaaladda Isticmaalaha, aqbalida, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn boos celin, ogeysiiskan sharci, iyo sidoo kale shuruudaha gaarka ah ee, halka ay ku habboon tahay, ku dhammaystiraya, xiriir la leh qaar ka mid ah adeegyada iyo waxyaabaha ku jira bogga.
Isticmaalaha waa la ogeysiiyey, wuuna aqbalay, in marin u helka degelkan uusan macnaheedu ahayn, sinnaba, bilowga xiriirka ganacsi ee AB Internet Networks 2008 SL. Sidan oo kale, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu adeegsado websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isaga oo aan ku xadgudbin sharciga hadda jira, iimaanka wanaagsan iyo nidaamka bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama u horjoogsato howlaha caadiga ah ee bogga waa mamnuuc. Ku saabsan waxyaabaha ku jira degelkan, waa mamnuuc:
Soo-saariddiisa, qaybinta ama wax ka beddelkeeda, gebi ahaan ama qayb ahaan, illaa ay oggolaansho ka hesho mulkiilayaasheeda sharciga ah mooyee.
Xadgudub kasta oo lagu sameeyo xuquuqda bixiyaha ama milkiilayaasha sharciga ah.
Isticmaalkeeda ujeedooyin ganacsi ama xayeysiis.
Bogagga shabakadda waxay ku siinayaan xiriiriyeyaal degello internet kale u gaar ah iyo waxyaabo ay leeyihiin dhinacyada saddexaad, soosaarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha.
Ujeedada kaliya ee xiriiriyayaashu waa in la siiyo Isticmaalaha suurtagalnimada helitaanka xiriidhada la sheegay iyo in la ogaado alaabtayada, in kasta oo AB Internet Networks 2008 SL aysan masuul ka ahayn kiis kasta natiijooyinka laga soo qaadan karo isticmaalaha iyadoo la marinayo xiriiriyeyaasha la sheegay.
Isticmaalaha doonaya inuu aasaaso aalad farsamo oo xiriirisa oo ka timaada degelkiisa barta shabakadda waa inuu helaa oggolaanshaha hore ee qoraal ee Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL.
Abuuritaanka xiriirku macnaheedu ma aha xaalad kastoo jirta jiritaanka cilaaqaadka ka dhexeeya AB Internet Networks 2008 SL iyo mulkiilaha barta uu ku xirmay xiriirku, ama aqbalaadda ama oggolaanshaha AB Internet Networks 2008 SL ee ka kooban ama adeegyadeeda. .
Shaqada dib u soo kabashada ama ka mid ah dhagaystayaasha AdWords ee la midka ah ayaa noo oggolaanaya inaan la xiriirno dad horay u soo booqday degelkeenna oo aan ka caawinno inay dhammaystiraan hawshooda iibinta.
Isticmaal ahaan, markaad gasho degelkeenna, waxaan rakibi doonnaa cookie dib-u-soo-celin ah (waxay ka imaan kartaa Google Adwords, Criteo ama adeegyo kale oo bixiya dib-u-eegis).
Cookie-kani wuxuu keydiyaa macluumaadka soo booqdaha, sida alaabada ay booqdeen ama hadii ay ka tageen gaadhigii wax iibsanayay.
Markuu booqdaha ka tago boggayaga, cookie-ka dib-u-soo-celinta ayaa ku sii soconaya biraawsarkooda.
Shuruudaha kale ee isticmaalka boggan
Isticmaaluhu wuxuu ballan qaadayaa inuu si taxaddar leh u adeegsado websaydhka iyo adeegyada laga heli karo, isaga oo si buuxda ugu hoggaansan Sharciga, caadooyinka wanaagsan iyo ogeysiiskan sharci.
Sidoo kale, waxay qaadaysaa, haddaanay jirin, oggolaansho qoraal iyo oggolaansho hore ah ee AB Internet Networks 2008 SL inay u adeegsato macluumaadka ku jira websaydhka, gaar ahaan macluumaadkaaga, iyadoo aanad awood u lahayn inay si toos ah ama si dadban uga faa'iidaysato ka ganacsiga ay ka kooban tahay marin u helid
Boggan wuxuu kaydiyaa feyl xog ah oo la xiriira faallooyinka loo diro degelkan. Waad ku dhaqmi kartaa xuquuqdaada helitaan, sixid, tirtirid ama diidmo adigoo u diraya emayl cinwaanka cinwaanka (at) realblog (dot) com.
Boggan, boggaga la xidhiidha iyo lahaanshaha waxa ka mid ah AB Internet Networks 2008 SL.
Websaydhkani wuxuu kakooban yahay iskuxirayaal isku xidha oo horseedaya degello kale oo ay maamulaan dhinacyada saddexaad ee ka baxsan ururkeenna. AB Internet Networks 2008 SL damaanad kama qaadayso ama mas'uul ka ah waxyaabaha laga soo ururiyay bogagga la sheegay.
Marka laga reebo, oggolaansho hore iyo qoraal oo ka timid AB Internet Networks 2008 SL, soo saarid, marka laga reebo adeegsiga gaarka ah, beddelka, iyo guud ahaan nooc kasta oo dhiig-miirasho ah, iyadoo la raacayo hanaan kasta, dhammaan ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira degelkan.
Waa mamnuuc in la fuliyo, iyada oo aan oggolaansho hore laga helin AB Internet Networks 2008 SL, wax isdaba marin ama wax ka beddel degelkan. Sidaas darteed, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay qaadan doontaa mas'uuliyad kasta oo ka timaadda, ama ka soo kici karta, iyada oo laga sheegayo wax ka beddelka ama wax isdaba marinta dhinacyada saddexaad.
Layli xuquuqda ARCO
Waad sameyn kartaa jimicsi, iyadoo la tixraacayo xogta la soo ururiyay, xuquuqda lagu aqoonsan yahay Sharciga Dhaqanka ee 15/1999, ee marin u helista, toosinta ama baabi'inta xogta iyo mucaaradka. Sababtaas awgeed waxaan kugu wargalinayaa inaad ku adeegsan karto xuquuqdan adoo adeegsanaya codsi qoraal ah oo saxeexan oo aad u soo diri karto, oo ay la socdaan koobi aqoonsi ah ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma, cinwaanka boostada ee Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 10 SL ama iimayl ahaan , ku lifaaqan koobi aqoonsi ah: la xiriir (at) actualityblog (dot) com. XNUMX maalmood ka hor waxaan ka jawaabi doonaa codsigaaga si aan u xaqiijino fulinta xaquuqda aad codsatay inaad fuliso.
Ka saarida dammaanad qaad iyo qaan bixin
AB Internet Networks 2008 SL ma bixiso wax damaanad ah mana masuul ka ahaato, sikastaba ha noqotee, waxyeelada nooc kasta oo ay keeni karto:
La'aanta helitaanka, dayactirka iyo howlgalka wax ku oolka ah ee websaydhka ama adeegyadeeda iyo waxyaabaha ku jira;
Jiritaanka fayras, barnaamijyo xaasidnimo ama waxyeello leh waxyaabaha ku jira;
Si sharci-darro ah, dayacaad ah, khayaano ah ama si lid ku ah adeegsiga Ogeysiiskaan Sharciga ah;
La'aanta sharci ahaanta, tayada, isku halaynta, faa iidada iyo helitaanka adeegyada ay bixinayaan dhinac saddexaad waxayna u suurto geliyeen isticmaaleyaasha websaydhka.
AB Internet Networks 2008 SL mas'uul kama aha xaalad kasta oo ka timaadda waxyeelooyinka ka dhalan kara isticmaalka sharci darrada ah ama aan habbooneyn ee degelkan.
Barxadda Yurub ee xalinta khilaafaadka khadka tooska ah
Komishanka Yurub wuxuu bixiyaa barxad xalinta khilaafaadka internetka oo laga heli karo iskuxiraha soo socda: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Macaamiisha ayaa awood u yeelan doona inay soo gudbiyaan sheegashadooda iyagoo adeegsanaya barxadda xallinta khilaafaadka ee khadka tooska ah
Sharciga lagu dabaqi karo iyo Xukunka
Guud ahaan, xiriirka ka dhexeeya AB Internet Networks 2008 SL ee ay la leeyihiin isticmaaleyaasheeda adeegyada telematic, ee laga helo degelkan, waxay ku xiran yihiin sharciga Isbaanishka iyo awooda.
Marwalba waa nalagaari doonaa: Xiriirkeena
Haddii ay dhacdo in isticmaale kasta uu leeyahay wax su'aalo ah oo ku saabsan sharciyadan ama faallo kasta oo ku saabsan bogga, fadlan la xiriir (at) actualityblog (dot) com.
Ogolaanshaha iyo ogolaanshaha
Isticmaaluhu wuxuu cadeynayaa in lagu wargaliyay shuruudaha ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, aqbalaada iyo ogolaanshaha daaweyntooda ee AB Internet Networks 2008 SL, qaab ahaan iyo ujeedooyinka lagu muujiyey siyaasadan asturnaanta.
Iyadoo la raacayo sharciga hadda jira, AB Internet Networks 2008 SL ma fuliso dhaqamada SPAM, sidaa darteed ma dirto emayl ganacsi oo aan horey u codsan ama u fasaxin isticmaalaha. Sidaa awgeed, mid kasta oo ka mid ah foomamka ku jira shabakadda, Isticmaaluhu wuxuu fursad u leeyahay inuu siiyo oggolaanshahooda cad ee uu ku helayo Warsidaheenna / Dacwadda, iyada oo aan loo eegin macluumaadka ganacsi ee sida gaarka ah loo codsaday.
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ogeysiis Legal